သွေးတိုးရောဂါအတွက် ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုး ဆေးစွမ်းကောင်းများ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » သွေးတိုးရောဂါ » သွေးတိုးရောဂါအတွက် ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုး ဆေးစွမ်းကောင်းများ
​သွေးတိုးတယ်​ဆိုတာ ​သွေးဖိအားက 140/90 mmHg ​လောက်​ကို မြင့်​တက်​သွာခြင်းပါ။ ​သွေးတိုးကို တိုက်​ခိုက်​ဖို့က သင့်​​နေထိုင်​မှုပုံစံ​ပြောင်းလဲဖို့က အဓိကအ​ဖြေဖြစ်​ပြီး လုပ်​ကိုလုပ်​ရမယ့်​အရာပါ။ အ​ခြေအ​နေ​တော်​​တော်​များများမှာ​တော့ ​သွေးတိုးကျ​စေဖို့ ​ဆေး​တွေ​သောက်​ရပါတယ်​။
ဒီ​ဆောင်းပါးက ​သွေးတိုးကုသဖို့အတွက်​ အသုံးများတဲ့​ဆေး​တွေအ​ကြောင်း​ပြောပြသွားမှာပါ။
Water pills လို့လည်း သိကြပါတယ်​။ ​ဆေး​တွေက ​ကျောက်​ကပ်​ဆီအဓိကသွားပြီး ဆိုဒီယမ်​နဲ့ ​ရေဓာတ်​ကိုပိုထုတ်​​စေပါတယ်​။ ဒါကတစ်​ကိုယ်​လုံးရဲ့ အရည်​ထုထည်​ကို​လျော့​စေပါတယ်​။ ​သွေးတိုးကုသဖို့အတွက်​သုံးတဲ့ diuretics ​ဆေး​တွေမှာ thiazide ​တွေပါဝင်​ပါတယ်​။
Thiazide ​တွေထဲမှာ chlorthalidone, hydroclorothiazide နဲ့ idapamide ​တွေပါဝင်​ပါတယ်​။ ဒီ water pills ​တွေက ဆီးသွားများ​စေပါတယ်​။ ဒါ​တွေက ဆိုဒီယမ်​၊ ပိုတက်​ဆီယမ်​နဲ့ ​ရေဓာတ်​နည်းခြင်း​ကြောင့်​ ဖြစ်​ရတဲ့ အား​လျော့ခြင်း၊ ကြွက်​တက်​ခြင်းနဲ့ တခြား​ရောဂါလကဏာ​တွေကို​လျော့​စေပါတယ်​။
ဒီ​ဆေး​တွေက angiotensin ဆိုတဲ့​ဟော်​မုန်းဖြစ်​​ပေါ်ခြင်းကို ပိတ်​ဆို့ပါတယ်​။ ဒီ ​ဟော်​မုန်းက ​သွေး​ကြော​တွေကို ကျဉ်း​စေပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ဒီ​ဆေးက ​သွေး​ကြော​တွေကို ပြန်​ကျယ်​လာ​စေပြီး ​သွေးတိုးကျ​စေပါတယ်​။
ပါဝင်​တဲ့​​ဆေး​တွေက​တော့ – benazepri, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril နဲ့ trandolapril ဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒီ​ဆေး​တွေက ဆီးချို၊ နှလုံး​ရောဂါနဲ့ နာတာရှည်​​ကျောက်​ကပ်​​ရောဂါရှိသူ​တွေအတွက်​ အကျိုးရှိပါတယ်​။
ဒီ​ဆေး​တွေက angiotensin ဆိုတဲ့​ဟော်​မုန်းရဲ့ လုပ်​ငန်းစဉ်​ကိုရပ်​​စေပါတယ်​။ အဲဒီ​ဟော်​မုန်းက ​သွေး​ကြော​တွေကိုကျဉ်းစပါတယ်​။ အ​ပေါ်က​ပြောသွားတဲ့ AC inhibitors ​တွေလိုဘဲ ဒီ​ဆေး​တွေ ​သွေး​ကြော​တွေကိုကျယ်​​စေပါတယ်​။
ARBs ​တွေထဲမှာ azilsartan, candesartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan နဲ့ valsartan တို့ဘဖြစ်​ပါတယ်​။
Calcium channel blockers ​တွေက ​သွေး​ကြောနံရံ​တွေနဲ့ နှလုံးကြွက်​သားထဲဝင်​တဲ့ ကယ်​လ်​ဆီယမ်​​တွေကို​လျှော့ချ​ပေးခြင်းဖြင့်​ ​သွေး​ကြော​တွေကို​ပြေ​လျော့​စေပါတယ်​။ Calcium channel blockers နှစ်​မျိုးရှိပါတယ်​။ Dihydropyridines (amlodipine, felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine နဲ့ nisoldpine) နဲ့ Nondihydropyridines (diltiazem နဲ့ verapamil ). သိထားရမှာက စပျစ်​​ဖျော်​ရည်​က ဒီ​ဆေး​တွေကို ​နှောင့်​ယှက်​နိုင်​ပြီး ​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုးဖြစ်​ပါ​စေတယ်​။
Beta blockers ​တွေက နှလုံးရဲ့အလုပ်​ကို​လျှော့ချ​ပေးပြီး ​သွေး​ကြော​တွေကိုပွင့်​​စေတဲ့အွက်​ နှလုံးခုန်​​နှေး​စေပြီး နှလုံးခုန်​အားမပြင်း​တော့ပါဘူး။ ရရှိနိုင်​တဲ့ beta blockers ​တွေထဲမှာ acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol, nebivolol, pindolol, propranolol နဲ့ timolo တို့ပါဝင်​ပါတယ်​။
ဒါ​ပေမယ့်​ Beta blockers ​တွေရဲ့ ​ဘေးထွက်​ဆိုးကျိုး​တွေက ပန်းနာရင်​ကြပ်​ကိုပိုဆိုး​စေခြင်း၊ တခြားအဆုတ်​​ရောဂါများ၊ နှလုံးအပြင်​က ​သွေး​ကြော​ရောဂါများဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင့်​ အခု​ပြောသွားတဲ့ ​ရောဂါရှိတဲ့သူ​တွေအတွက်​ ဒီ​ဆေးမ​ပေးပါဘူး။
သင့်​​သွေးတိုးကို ​လျှော့ချဖို့ လွယ်​ကူတဲ့နည်းလမ်းများ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဒီဇငျဘာ 29, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဒီဇငျဘာ 29, 2017
Combination Treatment for Hypertension. http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/combination-treatment-for-hypertension#2